Kusvikira Apple yatangisa yakanyanyisa Apple Watch, heano mamwe mabutiro ekudzidzira chero mutambo | Ndinobva mac
Kusvikira Apple yatangisa yakanyanyisa Apple Watch, heano mamwe mabutiro ekudzidzira chero mutambo
Iyo Apple Watch ndeimwe yemidziyo iyo inogona kutariswa seSwitzerland mauto banga. Izvo zvakakosha kune iro zuva nezuva. Izvo zvinobatsira kudzivirira kuti ugare uchitarisa pane yako nhare. Tinochengeta hutano hwedu y inotibatsira nemitambo yemitambo. Kunyangwe chiri chokwadi kuti iwachi inotaridzika kunge isina kusimba zvichienderana nemutambo watinoita. Asi izvo zvinogadziriswa nerubatsiro rweakateedzana e fzvimwe zvakanaka, zvakanaka uye zvakachipa izvo hazvizongotibatsire chete mumitambo yekudzidzira, tinogona zvakare kushandisa mamwe acho mazuva ese.
Runyerekupe rwakabuda kuti Apple inogona kunge ichifunga kugadzira Yakasimba Apple Tarisa kune avo vese vanoita zvemitambo. Pamusoro pazvose, mimwe mitambo yakanyanyisa iyo inogona kukonzera kuti wachi igume muvhu kana kutsemuka nepakati. Asi ngatiregei kufunga nezvemitambo zvakawandisa zvekuita mafirimu. Kana iwe uchidzidzira kuchovha bhasikoro, iwe unotoziva kare kuti zviri kupfuura zvingangoita kuti kana ukatambura kudonha, wachi haizopone. Saka tinogona kudoma zviitiko zvishoma, asi ine mhinduro iri nyore. Aya mabutiro atinopa kwauri izvozvi uye izvo asingadhuri zvachose kufunga izvo zvavanodzivirira.
1 Spigen Yakakwenenzverwa Armor Pro
3 SupCase kesi
Spigen Yakakwenenzverwa Armor Pro
The brand Spigen yakafanana nemhando yepamusoro mune zviitiko zvehunyanzvi zvigadzirwa. Izvi zvinonyatsoenderana neApple Watch mhando 4, 5, SE uye 6 mune ese ari mana mamirimita uye 40 mm. Iyo inongowedzera chete 44mm kutenderera iyo skrini. Nezve izvi, zvinokwanisika kudzikisira isingadiwe kubatana kweiyo skrini, yakajairika mune iyi mhando yemabutiro. Yakagadzirwa inoshanduka TPU, ine furemu, uko mabhatani eApple Watch anokwana zvakakwana. Inowanikwa mumarudzi akasiyana siyana:
Spigen 44mm muHondo Green, Dema kana Carbon Grey kwe € 20.99
40mm modhi mune yakasvibirira yemauto kana nhema ye € 19.99
Isu tinoenderera mberi neiyo Spigen brand. Uyu modhi, iyo Zvombo Zvakaoma zvimwe zvishoma zvezuva nezuva. Icho chifukidziro chewachi chete, hachibatanidzi tambo. Yakagadzirirwa iyo 44mm modhi uye yakagadzirirwa kutakura wachi yedu kwese kwese. Inowanikwa mune mamwe matatu akasvinuka mavara, sirivheri, nhema uye mat nhema. Inokwana zvakakwana uye mabhatani eApple Watch mhando 4, 5, SE uye 6. Icho chakati pfuurei kupfuura iyo yapfuura modhi. Ino nguva tiri kutaura nezve 2 mm gobvu, chimwe chinhu chisingazotinetse nezuva nezuva.
Spigen Tough Armor yeApple Tarisa 44mm
Isu tinoenda neimwe yemakesi akakosheswa zvakanyanya nevashandisi. Iyo Supcase brand, zvakare ari nyanzvi mukugadzira mabutiro emidziyo yetekinoroji, yakagadzira imwe yeApple Watch inoichengetedza zvakazara pasina kuwedzera kuwanda kwakanyanya kana huremu. Iyo inopa iko kunzwa kana iwe uchiishandisa kuwedzera iyo chaiyo tangi kune wachi, asi kwete nekuda kwekuti yakakura sei kana isiri iyo nekuda kwekuchengetedzwa kwayo. Kwete chete kuti inouya pamwe chete nedziviriro yeiyo Apple Watch kesi asi zvakare inosanganisa mabhanhire ane mbiri yekuvhara bhureki kune kumwe kudzivirirwa. Iko hakuna yakavakirwa-mukati skrini inodzivirira, asi iyo yakasimudzwa bezels inofanira kubatsira kuchengetedza iyo skrini. Nyaya yekucheka inopa mukana weDhijitari Korona, asi inodzivirira bhatani repadivi nekuvhara kwakazara. Inowanikwa yeiyo 4, 5, SE uye 6 mamodheru uye kune maviri azvino kesi saizi, 44 uye 40 mm.
Supcase mune yakatsvuka kana nhema ye44mm ye € 22.99
Supcase mubhizinesi ye40 mm ye € 22.99
Mumusika mune ipapo akawanda mamodheru ayo anoitirwa kuchengetedza chete izvo zvinoitika zvewachi uye nemitengo irimo kwazvo. Ivo havape chengetedzo iyo iyo mabutiro akaratidzirwa pano anogona kupa, ayo ari akakosha uye ane akavakirwa-mukati matambo. Asi zvirokwazvo, ivo vanogona kukununura kubva zvakajairika zuva nezuva kusvika zuvaKune mamwe makesi anogona kupa zvakati wandei chengetedzo pasina kukanganisa aesthetics, huremu kana ukobvu hwewachi
Semuenzaniso tinogona kurudzira izvi kubva Misxi ye € 9.99 uye inoshanda kumawatch akateedzana 4 zvichienda mberi zve44 uye 40 mm. Kana iwe uchida kuti irege kunyanyo kuoneka kuti iwe uri kupfeka chifukidziro, ichi chakajeka uye chakagadzirwa neTPU chakakodzera. Inobvumirwa 44 uye 40 mm uye Apple Watch mhando 4, 5, SE uye 6. Zvakare pamutengo we8.99 unouya maviri.
Tichakamirira kuti vaburitse runyerekupe rweApple Watch yemitambo yakanyanyisa tinogona kuenda kunotarisa zvimwe zveizvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » dzakawanda » Kusvikira Apple yatangisa yakanyanyisa Apple Watch, heano mamwe mabutiro ekudzidzira chero mutambo
Ikozvino yave kuwanikwa, mu beta, Adobe Illustrator yeApple Silicon
Pano unogona kutarisa kana data rako rakaburitswa paFacebook kana mune kumwe kurwiswa